America Yotsvaga Nzira Dzaingabatsira Nadzo Zimbabwe Kupedza Hunhapwa
Chivabvu 12, 2016
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas, vanoti America iri kutsvaga nzira dzekubatsira Zimbabwe mukupedza dambudziko rekuendeswa kwevanhu muhunhapwa kwevanhu kune dzimwe nyika uko vanonogara muhutapwa pamwe nekumbunyikidzwa kuita mabasa epabonde.
Vachitaura nevatori venhau muHarare Ambassador Thomas vati nyaya yekutengeswa kwevanhu yatekeshera pasi rese uye inokonzerwa nenhamo.
Vati nyaya dzaitaurwa nemadzimai aigara muhunhapwa kuKuwait ayo akadzoka kumusha nguva pfupi yapfuura dzakaburitsa pachena kuipa kwedambudziko.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development, VaClaris Madhuku, vaudza Studio 7 kuti zvinonetsa kupedza dambudziko iri nekuda kwekuti vanhu vari kutambura uye vanopedzesera vabuda munyika kuti vanotsvaga kurarama.
Vanoti kunze kweavo vanotengeswa kunyika dzakaita saanaKuwait nedzimwe, kune vakawanda vanofa kana kudyiwa nengwena nemhuka dzemusango vachienda kunyika dzakaita seMozambique neSouth Africa vasina magwaro ekufambisa.
Zvichakadai, gurukota rezvemukati menyika, VaIgnatius Chombo, vaudza vatori venhau kuti hurumende iri kutora matanho ose ainokwanisa kupedza dambudziko iri.
Asi kunyange hazvo VaChombo vataura mashoko aya, hurumende yavo yakatadza kubhadhara mari yekudzora vakadzi makumi matatu nevaviri kubva kuKuwait uye vakatozobatsirwa nemumwe muzvinabhizimisi wemuHarare VaWicknel Chivhayo.
VaChombo vanoti kusvika pari zvino pane vakadzi makumi manomwe vadzorwa kubva kuKuwait uye pane vamwe gumi nevatanhatu vari kugara pamuzinda weZimbabwe kuKuwait vakamirira kudzoka kumba.
Mune imwewo nyaya, VaThomas vakurudzira hurumende yeZimbabawe kuti itsvage vairwira kodzero dzevanhu, VaItai Dzamara, avo vakapambwa gore rapfuura muHarare.
Vanoti VaDzamara vanofanirwa kuburitswa kubva kwavari uye kana vaine mhosva yavakaparwa vomiswa pamberi pematare edzimhosva.
Ambassador Thomas, avo vakatosangana nevatungamiriri vemapato akawanda ezvematongerwo enyika vati nyika iri kushanda nemasangano akazvimirira munyaya dzekukodzero dzevanhu, kodzero dzevatori venhau pamwe nekusimudzira magariro akanaka evanhu.
Vatiwo avo vakatemerwa zvirango neAmerica vane mukana wekunyorera kuhurumende yeAmerica kuti vabviswe pazvirango izvi kana vachifunga kuti vakwanisa kuita zvinodiwa kuti varegererwe.
America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakawanda kuZimbabwe kudarika nyika dzese uye gore rega rega inopa rubatsiro runokosha madhora anodarika zana remamiriyoni emadhora munyaya dzekuwanisa vanhu, chikafu, dzidzo hutano nezvimwe.